Serbia: Famaliana ny soa nataon’i Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, Português, Italiano, Español, македонски, 日本語, English
Ampahany amin'ny tatitray manokana mikasika ny horohorontany tao Japana taona 2011 ity lahatsoratra ity.
Misy fomba fitenenana Serba taloha milaza hoe: “Manaova soa mba ahazoana zava-tsoa.” Ankehitriny, dia voaporofo io fahendren'ny ntaolo io.
Raha vao nianjady an'i Japana io voina izay tsy mbola nisy teo aloha io, dia naneho ny firaisan-kina tamin'ny endrika maro ny vahoaka Serba ho famaliana ny fanampiana natolotry ny governemanta Japoney ho an'i Serbia nanomboka tamin'ny taona 1999. Tsy adinon'izy ireo ny fanampiana natolotry ny vondrona Japoney POPOS, izay niantoka ireo zavatra rehetra ilain'ny mponina Serba haingana indrindra sy manan-danja indrindra: dia ny fitandrovana ny fahasalamana, ny fanabeazana any amin'ny ambaratonga voalohany, fampihenana ny fahantrana, fiarovana ara-tsosialy sy ny eo amin'ny manodidina, ary ny mahaolombelona amin'ny ankapobeny. Ny tolotra fanampiana farany indrindra nomen'i Japoney dia tamin'ny volana Martsa taona 2011. Na teo anoloan'ny toe-pireneny izay ratsy dia ratsy aza ny governemanta Japoney, dia nanolotra $125,000 ho an'ny tanan-dehiben'i Serbia Vlasotince sy Sokobanja mba hanohanana ny fanatsarana izay natao teo amin'ny sehatry ny manodidina tao Serba. Tamin'ity volana ity, ny governemanta Japoney dia nanolotra vola mitentina 77,943 euro ho an'ny fikambanan'ny kilemaina ao Banat, Srem sy ny foibe miandraikitra ny asa ara-tsosialy ao Paracin.
Marihina fa ireo vola rehetra ireo (mihoatra ny 200 tapitrisa ny fitambarany) dia nangonina avy amin'ireo mpandoa hetra ao Japana, ary nanam-paniriana ny hamaly ny soa nataon'ny vahoaka avy any amin'ny faritra Atsinanana izay tsara fanahy ny vahoaka Serbiana.
Nanome 25 tapitrisa amin'ny sandam-bola dinars (2.5 tapitrisa euro) ny firenena Belgrade mba hanampiana an'i Japana, ary niaraka tamin'izany koa dia namorona fomba fandefasana hafatra izay ahafahan'ny vahoaka Serba mandefa hafatra fanohanana an'i Japana ny tompon'ny tambazotram-pifandraisan-davitra miisa telo (VIP, MTS ary Telenor) ka ny vidin'izany dia 50 dinar (0.5 euro).
Io fanentanana fandefasana hafatra io dia niainga avy amin'ny mpisera Serba tao amin'ny Twitter. Tsy hay nafenina ny hafalian'izy ireo tamin'ny fahombiazan'io tetikasa io raha nametraka ny tenifototra #jazajapan (“Miaraka amin'i Japana”) izy ireo:
Tao anatin'ny roa andro, dia nandefa hafatra47,000 ireo mpampiasa sokajy Vip!
Te hanangana ankizy Japoney aho raha toa ka azo atao izany 🙂
Manana dobo filomanosana fitsaboan-tena maro ny Serba. Tokony misy olona eto amin'ny firenena hanasa ny Japoney hankaty amintsika mba hitsabo tena.
Maniry ny hampiantrano ankizy Japoney miisa 17 ao an-tranony ireo mpiasa amin'ny paositra ao amin'ny tananan'i Cacak. Mankasitraka ny fanampiana nataon'ny Japoney tamin'ny fananganana tobim-pahasalamana tao an-toerana miaraka amin'ny fitaovam-pitsaboana maro karazana misanda 1 tapitrisa $ izy ireo. I Lucani sy Gornji Milanovac, mpiasa amin'ny paositra avy any amin'ny renivohitr'i Ivanjica ao Serba dia nanara-dia ireo namany avy ao Cacak teo amin'ny faniriana ny hanolotra trano fialofana ho an'ny ankizy Japoney. I Nada Markovic, avy any Kosovo tsy manan-kialofana sady manan-janaka efatra, mipetraka anaty tanana kely iray ao Atenica ao akaikin'i Cacak, dia niangavy ny hampialofana ny zanany roa avy any an-tany lavitra.
Tao anatin'ny taratasy iray nosoratana ho an'ny ambasadaoro Japoney, , nanoratra ny Serba iray fadiranovana indrindra ao Serbia, mpianatra avy any Medvedja:
Atolotray amin-kalemem-panahy ho an'ireo ankizy ao Japana ny tranokelinay misy hafanana. Te hizara izay kely anananay izahay. Mino izahay fa vetivety dia ho vitan'ny olona ny fanarenana ireo tanana kely sy tanan-dehibe rava ireo.
Tamin'ny faha 18 Martsa , ny orkestra Filarmonika tao Belgrade dia nanolotra fampisehoana ho an'ny mponin'i Japana izay namoy ny ainy tamin'ny horohorontany sy tsunami (tondra-drano mahery vaika) izay natao tao amin'ny anjerimanontolo nasionalin'i Kolarac . Natomboka tamin'ny fahanginana mandritra ny iray minitra ny fampisehoana ho fahatsiarovana ireo niharam-boina tamin'io zava-doza io. Nanolotra fanampiana ny orkestra Filarmonika tao Belgrade ny governemanta Japoney tamin'ny taona 2005.
Vahoaka aman-jatony no nandray anjara tamin'io hetsika io “fanentanana an-tsary 1,000 vita amin'ny taratasy no natolotra ho an'i Japana” tamin'ny fanasana ny vondrona mpitoraka bilaogy B92 tao Belgrade. Ireo fanentanana an-tsary ireo dia vita amin'ny taratasy toy ny fanaovana origami, izay atolotra an'i Toshio Tsunozaki, ambasadaoro Japoney ao in Belgrade, ahitana hafatra manambara fa ny Serba dia “mandray ao am-po ireo vahoaka Japoney ary miray saina amin'izy ireo amin'izao fotoan-tsarotra iainan'ireo vahoaka ireo.” Navoaka lahatsary ny fitsipika rehetra fanaovana io fanentanana an-tsary io, ary afaka mankafy feonkira Japoney ireo mpitsidika ireo mandritra ireo hetsika ireo. Namoaka toro-lalana fanamboarana sarisary amin'ny alalan'ny taratasy amin'ny fomba origami ny bilaogy Serba Tokoyorama.
Rakitsary: vondrona Facebook Ljubitelji Japana – Tokyorama
Ao amin'ny Facebook, naneho firaisan-kina am-pahibemaso tamin'ny vahoaka Japoney ny vondron-piaraha-monina Serba iray tamin'ny fanamboarana sary fanevan'ny mponina Japoney tamin'ny alalan'ny vatan'izy ireo. Nandefa ity hafatra ity izy ireo:
Mahareta, hanohana anareo izahay, mahereza.
Nanohina ireo mpitoraka bilaogy Serba ilay sarim-behivavy Japoney iray izay nijoro teo anoloan'ny latabatra fametrahana entana tao anaty magazay iray, izay nampatsiahy azy ireo ny fahatsiarovana ratsy nahazo ny vahoaka Serba nanomboka tamin'ny taona 90. Vakio etsy ambany ny santionany amin'ny fanehoan-kevitr'izy ireo nalaina tao amin'ny fifanakalozan-dresaka tao amin'nyVujaklija.com .
Nanontany i Dumke:
Mety ve izao?
Namaly i Micko:
Izay ihany ka… moutarde 5 kilao.
Nanomboka nanao vazivazy zary tenany i Shinnok:
Mijoro eo ilay vehivavy, manontany tena hoe inona no alaina?… [ohatran'ny hoe manan-tsafidy izy].
Midera ny Japoney i xTx:
Raha nijery CNN ianareo, dia hita fa tsy mandraoka zavatra maro ao amin'ny magazay ny Japoney na dia afaka manao izany aza izy ireo […]. Misy lahatsary mihetsika mampiseho azy ireo tao amin'ny magazay potika iray ao. Samy maka rano iray tavoahangy avy ny olona tsirairay, tsy mihoatra izay, ka mametraka vola ao amin'ny fametrahana izany. Isika [eto Serbia] dia mety hangalatra ilay fitoeran'ireo tavoahangy ireo aza.